9style - Page 599 of 773 -
ဒေါက်တာထွန်းလွင်ရဲ့ နောက်(၂၄)နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းသတင်
October 13, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEမိုး​လေ၀သ
မုန်တိုင်းသတင်း ၁၃-၁၀-၂၀၁၈နံနက်(၁၀း၃၃)နာရီ (၁၃-၁၀-၂၀၁၈)ရက် အနံနက်(၀၀း၃၀)နာရီအချိန်တိုင်းတာချက်အရ အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေနေသော ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်း BOB/08/2916(Cyxlone TITLI) ဟာ လွန်ခဲ့သော(၆)နာရီအတွင်းက အရှေ့မြောက်ယွန်းယွန်းကို့ 17 kmph နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျှားလာခဲ့ပြီး၊ Lat: 21.80°N Long: 87.1°E တွင်…
၁၃-၇-၂၀၁၈ အတွက် ညနေခင်း ဦးဦးဖျားဖျား အားကစားသတင်းများ
October 13, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEအားကစားသတင်း
ဆာရီ ။ ။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို နည်းပြသစ်အဖြစ် ရောက်ရှိလာတော့မယ့် နည်းပြ ဆာရီဟာ ဆေးလိပ်ကို လက်ကမချအောင်သောက်သူဖြစ်လို့ ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ခွင့်မပြုထားတဲ့ စတန်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျကွင်းကြီးထဲမှာ အခက်တွေ့ဖို့ရှိနေတယ်လို့ မီဒီယာတွေက ဖော်ပြနေကြပါတယ်။ ဂျက်ဇ်ဂီတနဲ့ မှုခင်းဝတ္ထုတွေကို ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ ခေတ်မှီတဲ့နည်းပြကြီးကို ချယ်လ်ဆီးတို့…
၁၃-၁၀-၂၀၁၈ အတွက် ဦးဦးဖျားဖျား အားကစားသတင်းများ
အင်္ဂလန် ။ ။ အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ခရိုအေးရှားအသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ Nations League ပွဲစဉ်မှာ တိုက်စစ်မှူး ရက်ရ်ှဖို့ဒ်ရဲ့ အပိုင်အခွင့်အရေး လွဲချော်မှု (၂) ကြိမ်နဲ့အတူ ဂိုးမရှိသရေကျသွားခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှာ ဟယ်ရီကိန်း၊ စတာလင်၊…
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၃)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၃၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ================================== ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၆:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ အိန္ဒိယနိုင်ငံကုန်းတွင်း၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်(Depression)သည် အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက် ရွေ့လျားပြီး၊ နောက်(၁၂) နာရီအတွင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်…
မြေကျင်းတူးဖော်ရာမှရွှေအိုးတွေ့သဖြင့် အလုပ်ရှင်အားပေးအပ်ခဲ့သော်လည်း အလုပ်သမားအားထုတ်ပယ်သဖြင့်သတင်းစာရှင်း
October 13, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEကြားသိရသမှ
ရန်ကုန်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ချင်းတွင်းလမ်းရှိ ခြံတစ်ခြံတွင် အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရန် အလုပ်သမား ၃ ဦးက မြေကြီးတူးရာ ရွှေချောင်း ၃ဝ ကျော် ပါဝင်သည့်ရွှေအိုးတွေ့ရသဖြင့် နိုင်ငံတော်အားအပ်နှံရန်အလုပ်ရှင်ထံ သွားရောက် ပေးအပ်ခဲ့သော်လည်း အလုပ်ရှင်က နိုင်ငံတော်ထံမအပ်နှံသည့်အပြင် ရွှေအိုးစတင်တွေ့ရှိသည့် အလုပ်သမားအား…
ခြင်အပြင် ကြမ်းပိုး၊ ခေါင်းမှ သန်းများပင် မကပ်နိုင်တဲ့ အစားအစာများ
October 13, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEအထွေထွေဗဟုသုတ
ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ကြက်သွန်နီ ယင်းတို့တွင် Allicin Compound ပါဝင်ပြီး စားပြီးသည် နှင့် ချွေးပေါက်များမှ ယင်းအနံ့များ ထွက်လာတတ်သည်။ အလားတူ Allicin အနံ့ကိုထွက်စေသော အခြားအရာများမှာ ကြက်သွန်မိတ်၊ shallots ခေါ် ကြက်သွန်နီကလေး၊ chive…
သောကြာသားသမီးများ ထီဆုကြီးများပေါက်နိုင်သည့် ထီးနန်းသုံးအာယုစန်း နက္ခတ်အချိန်အခါကောင်း ချိန်….
October 13, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEဗေဒင်ရေးရာ
သောကြာသားသမီးများ ထီဆုကြီးများပေါက်နိုင်သည့် ထီးနန်းသုံးအာယုစန်း နက္ခတ်အချိန်အခါကောင်းဖြစ်ပါသည်……. ဒီအချိန်အခါဖြင့် မိခင်လောင်းများ…သင့်ရင်သွေးရတနာကို ခွဲစိတ်မွေးဖွားရယူပါက လွန်စွာပြည့်စုံကြွယ်ဝချမ်းသာသည့် ကဋေရှစ်ဆယ်ပိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝသော သူဌေးသား-သမီး ရတနာကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်(ရှေးခေတ်ကျမ်းဂန်ပါအသုံးအနှုန်း)……. ရင်သွေးမွေးဖွားပြီးသည်မှ အသက်(၈)နှစ် အတွင်း မိဘများ သုံးစွဲလို့မကုန်နိုင်အောင် ငွေကြေးအမြောက်အများ ရရှိလာမည်…. သာမန်လူပင်ဖြစ်ပါစေ…မုချသူဌေးသူကြွယ်များအဖြစ်…
မေမေပန်ပန် ထက်တောင် အင်္ဂလိပ်စာလုံးအသံထွက်တွေ ပီသအောင် ပြောတတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ Roar Roar
October 12, 2018 October 12, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ / ရုပ်သံ
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဆုပန်ထွာဟာဆိုရင် ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးနဲ့အတူ ဘဝခရီးကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနေထိုင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက် ၃ နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဆုပန်ထွာတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကတော့ အိမ်ထောင်သက် ၃ နှစ်တာကာလမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ စီးပွားရှာတယ်၊ သားသားလေး တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာကြည့်ရင်း…
ကံ အညံ့တွေကြုံနေလား? လာဘ်ပွင့်ချင်လား? ဦးပေါ်ဦးရဲ့ ဒီယတြာအတိုင်း လုပ်လိုက်ပါ
October 12, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEဗေဒင်ရေးရာ
“ကံအညံ့တွေကြုံနေလား?လာဘ်ပွင့်ချင်လား? အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦး လက်ထက်ကယတြာကောင်း” ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦး အမည်ပေးသော စိန္တကျော်သူဦးသြ၏ “အကြံကုန် ဂဠုန် ဆားချက်ကိန်း” ယတြာ လူတိုင်း အခက်အခဲကြုံလာသောအခါ..အညံ့နှင့်ကြုံသောအခါ…လာဘ်လာဘပိတ်ဆို့နေသောအခါများ တွင်..ဤ ယတြာကို ပြုလုပ်ပါက လက်တွေ့အကျိုးရှိပေသည်။ မည်သူမဆို လက်တွေ့…
ဟာသသရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော် ဦးမိုးဒီ ကွယ်လွန်ပြီဆိုတဲ့သတင်း
October 12, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ
ဟာသသရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော် ဦးမိုးဒီ ကွယ်လွန်ပြီဆိုတဲ့သတင်း ဟာသသရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော် ဦးမိုးဒီ ကွယ်လွန်ကြောင်း ကောလဟာလထွက်ပေါ် ဝါရင့်လူရွှင်တော်ကြီးအကယ်ဒမီ ဦးမိုးဒီ ဒီနေ့မနက် ၇ နာရီက SSCဆေးရုံမှာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သည် ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတက်လာသောသတင်းမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း…
Previous 1 … 598 599 600 … 773 Next